Iko US stock market inodonhedza 5%, ingave iko kutanga kwekuwedzera kudonha | Ehupfumi Zvemari
Panguva isingatarisirwe kune vanoita mari, "dema Muvhuro" wakabuda pamisika yepasi rese yemasheya. Kutanga kwesvondo hakungadai kwakatanga zvakanyanya kumisika yemari ye mari yakasiyana-siyana. Iko indekisi ine simba Dow Jones yakanga yasara yakapoteredza 5%. Imwe yekudonha kwakakomba munhoroondo yayo uye kusimba kwayo hakuna kuzomborangarirwa kubvira 2011, pakati peyakaipisisa mamiriro ehupfumi. Uku kuderera, kune rumwe rutivi, kwakapararira kune mimwe misika, seAsia neEurope. Chero zvazvingaitika, kunetsekana kwakaiswazve pakati pevashandisi vemusika wemusika.
Uku kuderera mumusika wemasheya, kunyanya iyo North America imwe, yakashamisa chikamu chakanaka chevanoongorora zvemari. Nekuti iyo shanduko yeNorth America equities yakanga isinganetsi kusvika parizvino. Kurova zuva nezuva zuva nguva dzese-dzakakwira uye uve mumwe wemisika yemari inobatsira kwazvo pasi rose. Nebatsiro iro mumakore gumi apfuura rasvika zana%. Ichokwadi kuti rumwe rudzi rwekururamisa rwaitarisirwa, asi kwete semhirizhonga mafambiro seayo akagadzira vhiki ino.
Ikozvino kutengesa kuri kuisa pachena pachayo panzvimbo dzekutenga. Asi hutsva panguva ino hwave mukuwedzera kwezvinzvimbo izvi. Kusvika padanho rekushamisa vashoma vadiki nepakati varimi vane tsoka yakachinja. Zvino izvo zvatiri kuyedza kuongorora ndezvekuti kudonha uku chiitiko chakazvimiririra uye chakasarudzika kana chimwe chinhu chakanyanya kukosha. Ndokunge, kutanga kwe rova izvo zvinogona kuve nemhedzisiro yakaipa pazvinzvimbo zvevatengesi. Iyi ndiyo imwe yekiyi iyo vamiririri vezvemari vari kuzvibvunza mazuva ano.
1 Zvikonzero zvekutsemuka muUnited States
2 Chii chichaitika kune chimbadzo?
3 Downs inowedzera kuEurope
4 Changamire chisungo chinzvimbo
5 Shanduko yechokwadi kuFed
6 Nzvimbo itsva dzebhizimisi
Zvikonzero zvekutsemuka muUnited States
Kurasikirwa ne5% muchikamu chimwe chete chekutengeserana mazwi makuru kana zvasvika kune equities. Chero zvazvingaitika, chekutanga uye chiri pachena chikonzero chekupunzika kweUnited States stock market yakabatana nesarudzo pane iyo simuka muzvibereko. Iye zvino zvinoita sekunge hazvizo fambire mberi, seizvo vatengesi vaifungidzira. Kana zvisiri izvo zvinogona kuve messier uye nekukurumidza kupfuura zvaungatarisira. Iko kutya kuripo panguva ino muchikamu chakanaka chevashambadziri vadiki nepakati uye chakaendeswa kumisika yemari.
Huye, zvese zvinoita senge zvinoratidza kuti hupfumi hweNorth America huri kuenda sepfuti, sekuratidzwa kwakawanda kwaro macroeconomic indices. Asi neka nuance kadiki, uye izvo ndezvekuti pane zvinoratidza kuti kumwe kudziya kunogona kuitika mukati maro. Uye ichi chakakosha chinhu chinogona kuve nemhedzisiro inokanganisa pakushandiswa kwemutero wezinga rezviyero kune rimwe divi reAtlantic. Uye kutya uku kwakaratidzwa kune misika yemasheya. Aya ndiwo marondedzero akaitwa ichi chinhu chisina zvishoma uye hapana chinopfuura 5% chinotsanangurwa.
Chii chichaitika kune chimbadzo?
Chero zvazvingaitika, pane chinhu chimwe chakave chakajeka uye icho ndicho icho sarudzo pamitero yezvibereko MuUnited States, inoramba ichiita sarudzo yekushanduka kwemisika yemari. Izvi zvakaburitswa nehusimbe hukuru mumazuva ano. Nekutengesa kumanikidza kusati kwaonekwa mumakore, zvirinani mumisika yemasheya yeAmerica. Nedonhwe hombe rakambonyorwa muDow Jones. Chinhu chakakurudzira kusava netariro kwazvo kumisika yezvemari kuti ienderere mberi nemazano avo ekushomeka mumisika yemari.
Chero zvazvingaitika, masheya eEurope akadonha akatenderedza 2%, achizvuzvurudzwa pasi nekudonha kukuru kwazvo mumapoinzi akanyorwa naDow Jones. Iine kubatana kwakananga zvine chekuita nemitengo yemugove mune imwe misika mikuru yepasi rese yemari. Kusvika pakuratidza kuwirirana kukuru kuriko panguva ino neaya mare emari. Kwete pasina, Asia misika Vakasiyawo vangangoita 4% paavhareji mumazuva maviri ekutanga evhiki. Ikozvino zvinongova zvakakosha kutarisa kuti izvi zvinowira mumahara epasi indices zvichave nekuwedzera kuwedzerwa mumazuva anotevera.
Downs inowedzera kuEurope
Kwete chete musika wekuAmerican wemusika wakaenda zvakashata mazuva ano. Kana zvisiri, pane kudaro, mukondinendi yekare iyi kuzunza yakave ichiratidzwawo munyika yemusika wemasheya. Semhedzisiro, iyo French CAC 40 yaive pasi 2,35%; iyo yeBritish FTSE, 2,64%; iyo Dax yeFrankfurt, 2,32% uye MIB yeMilan, 1,52%. Nezve musika weSpanish wemusika, zvinofanirwa kutaurwa kuti yakachengeta mutsetse mumwe chete kana iyo Ibex 35 2,5%. Neramangwana mune tsvuku mumisika dzese, izvo zviri kusahadzika zvinoratidza kuwira kwakanyanya mukati mevhiki. Kunyangwe ivo vangangodaro vasina kuve hwakaenzana seMuvhuro.
Chero zvazvingaitika, hausi iwo wega musika wezvemari wakarasikirwa nemutengo mumazuva ano akaomarara kune vese varairidzi. Imwe huru yakakanganiswa yaive oiri, kubvira iyo dhiramu brent, bhenji muEurope, yasara iri pamusoro pe $ 67 chete. Nekudonha muukoshi hwomutengo wayo we0,70%. Nekudaro, izvo hazvina kunge zvichishamisa senge mune kesi yeakanyanya indices epasi rese. Nesimba rakanyanya kushomeka kusvika zvino.
Changamire chisungo chinzvimbo
Imwe yemhedzisiro yemhedzisiro yekudonha kukuru mune zviyero kutenderera pasirese yakashanduka mu mabhonasi. Nekuti zvazviri, kubva pane ino nyowani maonero ekudyara, iyo US bond yakabuda pachena mazuva ano nekumaka kufarira kwe2,7%, iyo inopesana neiyo purofiti iri kupihwa nehusungwa hweGerman mazuva ano, iyo inofamba mubhendi iro riine avhareji 0,7%. Mitengo iyi inofungidzira kukwidziridzwa kweramangwana, kunova kutya kukuru kune misika yemari. Uye uko iko kudonha kwemari muUnited States kwakatariswa uye kusvika padiki pane kune kune dzimwe nzvimbo dzenyika.
Naizvozvo, kudonha uku mumusika wemasheya kunogona kududzirwa senge kungounganidza purofiti mumusika wemasheya weUS. Kunyangwe iine zvakanyanya kukosha zvinorehwa kubva kune dzimwe nzvimbo dzekudyara maonero. Mupfungwa iyi, haugone kukanganwa kubva zvino zvichienda kuti kwave nekuchinja kwemuridzi mu mari yemitemo kuyambuka Atlantic. Uye ichi chinhu chinogona kukonzera kusavimbika pakati pevashambadzi vadiki nepakati.
Shanduko yechokwadi kuFed
Uye hazvikanganwike izvozvo Federal Reserve yeUnited States (FED) inotora hutungamiriri hutsva uye izvi zvinogara zvichidyara chigumbu mumisika yemari. Pane matanho ayo anogona kutorwa mune zvemari nyaya uye zvakanyanya kunyanya zvakabatana nemutengo wemitero. Zvimwe zveizvi zvakare zvine chekuita nekuparara kwemusika wemusika pakutanga kwevhiki. Hazvishamise kuti zviri kutanga kufungidzirwa kuti mukuru mutsva weFed, Jerome Powell, anogona kuita mamwe mafambiro ane hutsinye emari kana achangosvika muhofisi. Nekuti kana zvirizvo, kuderera uku mumisika yemari kwaisazove nenguva. Kana zvisiri sechirevo chekucheka nyowani uye pamwe zvakatonyanya zvakanyanya maererano nemhedzisiro yayo.
Kune rimwe divi, hazvibvumirwe kunze kuti iwo musika wemasheya unoramba uchiwedzera kukosha kune ako mari, asi chinhu chimwe ndechechokwadi uye ndiko kuti kusagadzikana kwasvika kumisika yemasheya yeanenge munhu wese zvakare. Iko kushanduka kwe VIX index Izvi zvinoonekwa mumazuva maviri aya, paine chinopfuura chakakosha kusimuka mumatanho avo. Ehe, iwe haugone kukanganwa kuti izvo ino index yakanangana zvakananga nematanho emusika wemasheya kutya kwevatyairi. Uye izvozvi zvaari kutaura ndezvekuti pane zvakawanda.
Nzvimbo itsva dzebhizimisi
Kunyangwe kana iwe ukaisa mari muchiyero ichi, usakahadzika kuti iwe unozokwanisa kuwana mari yakawanda kubva ikozvino zvichienda kana kusagadzikana mumisika yemari kuri kwechokwadi. Kunyangwe paine njodzi huru mukushanda sezvo zvichidikanwa kuti upe ruzivo rwakawanda murudzi urwu rwemafambiro akasarudzika kubva kunzvimbo dzese dzekuona. Chero zvazvingava, iro razvino gore idzva rakatanga kufamba zvakanyanya kupfuura zvaifungidzirwa kubva pakutanga.
Iko, pasina kupokana, mikana yebhizinesi inoenderera ichizobuda, kunyangwe zvinhu zvikashata mumusika wemasheya mune yasara yegore. Zvirinani chiitiko chitsva icho iwe chausina kufanira kugadzirisa zviitwa zvako pamusika wemasheya. Nekuti pakupera kwezuva iri ndiro bhegi. Iko kwaunogona kuwana mari yakawanda, asi zvakare siya akawanda ma euro munzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Musika weUS stock unodonha 5%, kungave kuri kutanga kwekudonha kwakawanda
Bitcoin inorasikirwa ne50% yeiyo kukosha muvhiki rapfuura